DHAGEYSO Maamulka degmada Balcad oo ka hadlay dhibaatada dadka deegaankaas haysata. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Maamulka degmada Balcad oo ka hadlay dhibaatada dadka deegaankaas haysata.
Guddoomiyaha degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaah dhexe Qaasim Cali Nuur(Furdug) oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in degmada Balcad iyo tuulooyinka hoostaga aysan laheyn Goobihii adeegtada Bulshada sida Isbitaal iyo Xarumo kale oo muhiim u ah adeegyada bulshada deegaankaasi.
Waxa uu tilmaamay in marka qof ka mid ah dadka deegaankaasi ay la soo darsaan xanuuno Qatar ah loo la cararo Magalada muqdisho hadana xilliyada habeenkii ay dhibaato ku qabaan jidka u dhexeeya degmada Balcad iyo magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha degmada Balcad ayaa Maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ugu baaqay in wax laga qabto caqabada haysta shacabka ku nool degmada Balcad sidoo kalena la dhiso jidka xiriiriya Muqdisho iyo balcad lagana qaado ciidamada xiliyada habeenkii halkaasi aaga ka haya oo ay adag tahay in si deg deg ah looga gudbo.
← DHAGEYSO Maamulka Gobolka Banaadir oo dib u furay garoon ay Al-shabaab horay u xireen.
DHAGEYSO Dib u eegista Dastuurka Soomaaliya oo la shaaciyay xiliga la soo gabagabaynayo. →